कोरोना न्यूनीकरणका लागि सतर्कता अपनाऔं – Aggrani News
शनिबार, बैशाख ११, २०७८ ६:५०:१७
बंशी कुमार शर्मा गौतम
२०७७ साल डर त्रासले बितेकोमा नया वर्ष २०७८ को शरुवात मै दोश्रो चरणमा देखा परेको कोरोना भाईरसले फेरी बिश्वलाई त्राहीत्राही बनाएको छ । कोरोनाको भ्याक्सीन आएपछि उत्साहित भएका जनता फेरि निरास भएका छन् । कोरोना भाइरस सक्रमण न्यूनीकरण भएको समाचार आएको केहि महिना नवित्दै संक्रमणले उग्र रुप लिन थालिसकेको छ ।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड नगरौ, धेरै मानिसहरु जमघट हुने स्थल बन्द गरौ, बालबालीका पनि संक्रमणबाट प्रभावित भएकोले बिद्यालयहरु केहि दिनलाई बन्द गर्ने आग्रह गरेको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर बिद्यालय सञ्चालन गर्नु पर्ने अडान लिएको छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशका १४ जिल्लालाई कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमको सूचिमा राखेको छ । त्यसमा दाङ जिल्ला पनि परेको छ । सवै भन्दा ठुलो स्वास्थ्य नै हो । मानिस स्वस्थ भए शिक्षा जहिले पनि लिन सकिन्छ ।
जीवन र मृत्यस“ग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था देख्दा कहाली लाग्दो छ । संक्रमणको संख्या बढदै जाने हो भने व्यवस्थीत अस्पताल नै छैनन् । नेपाल सरकारले जर्वजस्ती तयार गरेका कोरोना बिशेष अस्पतालले संक्रिमितहरुलाई प्रभावकारि सेवा दिन कति सक्यो सकेन त्यसको मुल्याङकन होला ? त्यसमा देखिएका कमिकमजोरीलाई सच्चाउदै अव प्रभाकारी सेवा दिन सक्नु पर्दछ ।
कोरोना संक्रमितको आशंकाले अरु बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुन हु“दैन । स्वास्थ्य उपचारको नाममा खोलिएका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको दयनीय अवस्था र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको चरम लापरवाहीका कारण केही दिन यता देशका विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य उपचारमा लापरवाही भएको गुनासो आइरहेका छन् ।
नेपाली जनता सवै सुगम क्षेत्रमा बस्दैनन् दुर्गममा पनि बस्छन् । सुगम क्षेत्रमा त प्रभावकारी सेवा हुन सकेनन् भने देशको दुर्गम क्षेत्रको अवस्था झन् कस्तो होला ? दुर्गम क्षेत्रका अधिकांस सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा दरबन्दीमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीहरु पनि गएका छैनन् भन्ने समाचारहरु आएका छन् । सरकारले दरबन्दी समेत तोकेर पठाएका कर्मचारीहरु सम्बन्धित क्षेत्रमा नजानु नै सरकारकै कमजोरी हो भने कर्मचारीहरुले सरकारको आदेशलाई अवज्ञा गरेको ठहरिन्छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरु, सरकारी अस्पतालमा नबसेर शहरका नीजि क्लिनिकमा बस्ने गर्दछन् । त्यही नीजि क्लिनिकहरु पनि उनीहरुकै लापरवाहीका कारण बदनाम भइरहेका छन् । केही चिकित्सककै लापरवाहीकै कारण सबै चिकित्सालय नै बदनाम हुने भएका छन् । त्यसैले चिकित्सालय विश्वास योग्य र चिकित्सक जस्तो मर्यादित पेशालाई जोगाई राख्नको लागि सबै तह र तप्का सजग हुन जरुरी देखिन्छ । त्यसको लागि सर्वप्रथम स्वास्थ्य क्ष्ँेत्रलाई मर्यादित बनाउन जिम्मा लिएका स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभागमा कार्यरत उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले जिम्मेवारी बहन गरी गलत कार्य गर्नेलाई कारवाही गर्ने, सजाय दिने र सरकारले खटाएको ठाउ“मा अनिवार्य रुपले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी जानैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
नत्र भने विश्वव्यापी संकट बनेको कोरोना भाइरससंग जुध्न कठिन छ । रोग लाग्नु भन्दा रोग लाग्नै नदिनु उत्तम उपाय हो । कति संभव कति असम्भव हुन्छ । तसर्थ पुर्व तयारी गर्नु उत्तम उपाय हो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउदै कोरोना संक्रमनलाइ न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउदै सतर्कता अपनाउनु पर्दछ ।